Ronaldo Oo ku Dhawaaqay Inuu Ka Tegay Real Madrid | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ronaldo Oo ku Dhawaaqay Inuu Ka Tegay Real Madrid
Xiddiga xulka qaranka Portugal iyo Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa si rasmi ah ugu dhowaaqay inuu ka tegay Real Madrid, isla markaana aanu dib ugu laaban doonin Spain.
Ronaldo oo ay ku socoto dacwad la xidhiidha lunsi cashuur oo dhan 14 milayn oo Euro, ayaa waxa uu dareemay in si xaqdarro ah ay dawladda Spain u haysato, isla markaana aanu jirin cashuur uu kala baxsaday. Sidoo kale, waxa uu Real Madrid ka tirsanayaa in aanay u garab istaagin sidii uu u baahnaa, sidaas daraadeedna aanu dib ugu laaban doonin.
“Waan ka tegayaa Real Madrid, go’aankana waan gaadhay, dibna ugama noqonayo” sidaas waxa uu Ronaldo u sheegay ciyaaryahannada xulka Portugal ee ay ku wada sugan yihiin waddanka Ruushka halkaas oo ay kaga qayb-gelayaan ciyaaraha Koobka Qaramada Dunida.
Subaxnimadii Jimcaha ayaa lagu waaberiistay war dunidu la yaabtay oo uu qoray wargeyska A BOLA oo ka soo baxa Portugal, kaas oo baahiyey in uu Ronaldo go’aansaday inuu ka tago Real Madrid, una wareego horyaal kale.
Kooxaha Manchester United iyo PSG ayaa la sheegay inuu midkood ku waajahan yahay, laakiin kooxda Real Madrid ayaa doonaysa in loo shubo 180 Milyan oo Euro, markaasna ay qaadan karto kooxda rabtaa.